Semalt: Kuziva Spam uye Mafiro Anoita MuGoogle Analytics
Google analytics ndechimwe chezvinhu zvakasimba zvikuru zvinoshandiswa kutevera, kutarisa uye kugadzira webhusaiti yepaiti kubva pakatanga kwarwo muna 2005. Chirongwa chekuongorora chave chiri nyaya yekukurukurwa munguva pfupi yapfuura mushure mokutaurira nhema web traffic statistics. Ghost uye spam zvinotumira kuGoogle kuongorora ndezvimwe zvezvinhu zvakakosha zvikuru zvinoratidzira ruzivo rwenhema kune webhutungamiri webhusaiti.
Muchikamu chechinyorwa chino, Jack Miller, we Semalt Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira, anopa ruzivo runonzwisisika pamusoro pe spam uye mweya inoshandiswa iyo inobatanidza Trojan, malware uye utachiona kurwisana nemakombiyuta - appraise online business.
Spam Referrals - Unozviziva Here?
Google Analytics dzimwe nguva inoratidza kutyisa kwemashamba emigwagwa pamusoro pewebsite. Rimwe zuva motokari inotenderera pane imwe nzvimbo yakaderera uye kamwe-kamwe inotasva pasina pasina. Kusiyana kwekufamba kwemigwagwa kwewebsite kunoshamisika kubva kune rimwe zuva kusvika kune imwe kana mukati memamwe maawa pasina kuziva kuti vashandi vewebhu vanobva kupi. Spam referrals inogona kuunza ruvara rwekutengesa kune webhusaiti, iyo inoratidza chimwe chinhu paGoogle Analytics. Pasina nzira yakakodzera yokuongorora nzira yekuona spam uye ghost referrals, malware uye utachiona zvinogona kuparadza urongwa pamwe chete. Vafambi venhema vanogona kuvaka tariro yechema kune muridzi wepaiti kuti vavarambe mari yakawanda..
Spam uye ghost referrals dzinyore nhamba dzenhema paGoogle Analytics. Vashandisi veIndaneti vasingashanyi nereji rejw.org senzira chaiyo. Spam motokari inogona kukonzera kurasikirwa kwemari kune muridzi webhusaiti yakafanana neTrojan, virusi, uye malware. Kudzivirira uye kubviswa kwepamigwagwayo kunogona kuita kuti kuve nematareji akaenzana emigwagwa.
Kune marudzi maviri e spam anoshandura nhamba chaiyo yevashanyi pane webhusaiti sezvaakanyoresa paGoogle Analytics. Spam inogona kunge iri spam kutsvaga kana mweya kutumira. Nepo ghost referrals inyoresa sevashanyi chaivo pawebsite kunyange musina kushanyira nzvimbo yacho, spam referrals vanoita zvitsvaga kutsvaga kuburikidza newebsite iyo inoshandura data. Kungofanana nemarware uye mavairasi, spam inoda kubviswa kusimbisa utsanana pawebsite.
Ziva Spam Traffic
Hasi humwe hukama hunobatanidzwa kuburikidza ne emaimeri, webhusaiti, uye nhepfenyuro yevamwe vanhu vane ushamwari kumakombiyuta ekuchengetedza Kushandura kunyoreswa kunyoreswa nehuwandu hwekunyevera kunokosha. Kubatana kunowanikwa kunogona kukonzera malware, mavairasi, uye Trojan kuti zvikuvadze zvakakomba kombiyuta. Kushandisa antivirus software kunogona kubatsira kutarisa kuchengeteka kwehutano usati wasvika paIndaneti.
Kuwana Spam Referral links muData
Menyu inodzokorora pasi pe All Traffic muChikamu chekutsvaga inowanika muGoogle Analytics iyo inopa muongorori wevashanyi vewebsite. Kushandura pa "advanced" link kunopa sarudzo yekuderedza zvidzidzo. Mumwe mushanyira anoshanyira unoitika kanopfuura ka gumi unogona kukanganisa matanho emugwagwa kusvika pamwero mukuru uye ungaguma nekutsvaga kutsvaga.